Semalt का सोशल मिडिया मार्केटिंगका लागि गाइड
सोशल मिडिया मार्केटिंग भनेको के हो?
भित्र जानु अघि सामाजिक मिडिया मार्केटिंग
सामाजिक मीडिया प्लेटफर्म र मार्केटिंग
सोशल मीडिया मार्केटिंग सेवाहरूको समारोह
सशुल्क सामाजिक मिडिया अभियान जित्नेको सिर्जना
> ब्रान्डको हालको सोशल मीडिया स्थितिको विश्लेषण
सोशल मीडिया यस वर्तमान युगमा "यो" हो; लगभग सबैजना अब सोशल मीडियामा छन्। जे होस्, उमेर समूह, साथ साथै विभिन्न सामाजिक मिडिया प्लेटफार्ममा व्यक्तिहरूको लि gender्ग, व्यक्तिहरूको लागि प्लेटफर्मको प्रकार्य क्षमता अनुसार फरक हुन्छ। जेसुकै भए पनि, त्यहाँ श doubt्का छैन कि सोशल मिडिया भनेको व्यक्तिमा पुग्ने र ग्राहकहरूको रूपमा हिचिकउने माध्यम हो। व्यवसायलाई बढावा दिनको लागि सामाजिक मिडिया मार्केटिंगको प्रभावकारिता किन यस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, टिक्टक, इत्यादिमा आज विपणन-आधारित अभियानको संख्या बढ्दै छ।
तपाईंको व्यवसायको राम्रो परिभाषित सामाजिक मिडिया उपस्थिति हुनु आवश्यक छ जुन तपाईंको ब्रान्ड व्यक्तित्वलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो यस्तो छ कि तपाइँको व्यापार यस विश्वव्यापी इन्टर्नेट युगमा प्रासंगिक रहन सक्छ। कम्पनियहरु जाँच गर्नुहोस् जुन सामाजिक मिडिया मार्केटि ofको ज्वारसँग मिल्दैनथ्यो र तपाईले पत्ता लगाउनु हुनुहुनेछ कि यी व्यवसायहरू हाल सम्बन्धित उद्योगहरूमा पछाडि छन्।
२। सामाजिक मिडिया मार्केटिंग (एसएमएम) के हो?
सोशल मीडिया मार्केटिंग एक व्यवसाय रणनीति हो जुन सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरू प्रयोग गर्दछ मौजूदा ग्राहकहरूलाई कायम राख्न, नयाँ र सम्भावित ग्राहकहरू समायोजन गर्न विस्तार गर्दै। यो रणनीति अवस्थित ग्राहकहरु र सम्भावितहरु संग बलियो सम्बन्ध बनाउन मा प्रभावी छ। तपाईं यो विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको ग्राहक/ग्राहकहरूसँग अन्तर्क्रियामा संलग्न हुन, नयाँ ग्राहकहरू/ग्राहकहरू प्राप्त गर्न, र बिक्री र राजस्व पनि बढावा गर्न सक्नुहुन्छ।
केहि एसएमएमलाई केहि रूपमा हेर्नुहोस् व्यवसाय विज्ञापन को रूप; यो केही हदसम्म सत्य हो। एसएमएमले सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा ब्रान्ड-सम्बन्धित सामग्रीको सिर्जना र साझेदारीको माध्यमबाट यसको विज्ञापन प्रविधि हासिल गर्दछ।
यसका अतिरिक्त, SMM लेडि gene उत्पन्न गर्न र यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न सामाजिक मिडियामा आधारित भुक्तान गरिएको विज्ञापनहरू पनि प्रयोग गर्दछ। सामग्री सामान्यतया तस्विर, भिडियोहरू, पाठहरू, ब्लग पोष्टहरू, र अन्य इन्फोग्राफिक्सको रूपमा ब्रान्डको सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा पोष्ट गरिन्छ।
।। सामाजिक मिडिया मार्केटि ((एसएमएम) मा डिलिभ गर्नु अघि
त्यहाँ कुनै शंका छैन कि सामाजिक मिडिया मार्केटिंग व्यवसाय र संगठनहरूको लागि प्रभावकारी छ, तर त्यो प्रभावकारिता केवल तब प्राप्त गर्न सकिन्छ यदि एसएमएम अनुकूलित र रणनीतिक रूपमा पहुँच गरियो। ।
तपाईले एसएमएम अभियानहरू सिर्जना गर्नु सुरु गर्नु अघि, लक्ष्यहरू बुझ्नुहोस् जुन तपाईं प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। के तपाइँ केवल तपाइँको अनुयायी-आधार निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ, वा तपाइँ नयाँ र अवस्थित ग्राहकहरुसँग जोडदार साथ जोड्न चाहानुहुन्छ? तपाईंको व्यवसायको प्रकार र तपाईंको लक्षित दर्शकहरू, उदाहरणको लागि, B2B वा B2C बुझ्नुहोस्।
यसले तपाईंको लक्ष्य हासिल गर्न सही SMM दृष्टिकोण निर्धारण गर्दछ। यो तपाइँ तपाइँको लक्षित दर्शकहरु सम्म पुग्न प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो प्लेटफर्म जान्न मद्दत गर्दछ। उदाहरण को लागी, तपाई मध्यम आयु वर्गका नागरिकहरु र टिकटोक र स्न्यापचट मा बुढो उमेर समूहहरु को लागी पुग्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न; तपाईं तिनीहरूलाई फेसबुकमा फेला पार्नुहुनेछ।
Social. सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरू र मार्केटिंग
तपाइँको लक्षित दर्शकमा निर्भर गर्दै, तपाइँको सर्वाधिक केन्द्रित सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म फरक हुन सक्छ। तपाईंको फेसबुक हुन सक्छ, जबकि अर्को ब्राण्डको आफ्नै ट्विटर हुन सक्छ। जे होस् तपाइँले तपाइँको लक्षित ग्राहक/ग्राहकहरूको सबै भन्दा बढी प्रयोग गरिएको प्लेटफर्ममा सबै भन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, तपाइँ अझै पनि अन्य प्रमुख सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू वा तपाइँको उद्योगसँग सान्दर्भिकमा कडा उपस्थिति हुनु आवश्यक छ।
निम्न आधारभूत सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू छन् जहाँ ब्रान्डले प्राय: उनीहरूको सामाजिक मिडिया मार्केटिंग दृष्टिकोण सुरु गर्दछ। आधारभूतहरूलाई एकसाथ, Youtube, Linkedin, Pinterest, Nextdoor, Quora, Reddit, र अधिक अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरू हुन् जुन तपाईं आफ्नो ब्रान्डको सोशल मिडिया मार्केटिंग खेती गर्न सक्नुहुनेछ।
फेसबुक सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूको रूपमा चिनिन्छ र सब भन्दा घेराको रूपमा देखिन्छ। यसलाई सबै-समाहितको रूपमा हेरिएको छ किनकि विविध आयु समूह, लिंग, सामाजिक र राजनीतिक स्थितिका मानिसहरू प्लेटफर्ममा आफ्नो बाटो बनाउँदछन्।
सुव्यवस्थित प्रयोगको लागि, फेसबुकको सबैभन्दा सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू २ and र + 55+ बीचका छन्, र हो, दुबै पुरुष र महिला त्यो उमेर समूहका सदस्यहरू प्रयोग गर्छन्। फेसबुक बढाइएको ट्राफिक र महत्वपूर्ण वित्तीय सुराकीको लागि सामाजिक मेडियस प्रयोगकर्ताहरूमा ड्रइ businesses व्यवसायको एक कुशल तरीका हो।
यस मञ्चको माध्यमबाट तपाईं आफ्ना अनुयायीहरूलाई पाठ, फोटो, भिडियो, GIF, मेम्स, र ब्लग पोष्टहरू प्रयोग गरेर संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुक यसको भुक्तान विज्ञापन को लागी एक विशेष प्रणाली छ; यसले भुक्तान गरिएको विज्ञापनहरूलाई सजिलो बनाउँदछ। साथै, फेसबुकले तपाईंको विज्ञापनहरू पनि इन्स्टाग्राममा पठाउँदछ किनकि ती दुबै एउटै संगठनका उत्पादनहरू हुन्।
फेसबुकको सेटअप दिईयो, यो स्थानीय उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। SEO सals्केतहरू, तर यसले तपाइँ कसरी आफ्नो रणनीतिक अभियानहरु लाई स्थिति मा निर्भर गर्दछ। Semalt ले तपाइँको एसईओ लाई सामाजिक मिडियामा मात्र होइन, तपाइँको वेबसाइटमा पनि जिउँदो बनाउन दिनुहोस्।
फेसबुकमा तपाइँको उपस्थिति निर्माण गर्न, तपाइँले topnotch सामग्री अपडेट गर्नु पर्छ जुन तपाइँको लक्षित बजार पेचीरो हुन्छ। यसले तपाईंको अनुसरणकर्ता-आधारलाई व्यस्त राख्न मद्दत गर्दछ। उनीहरू तपाईका पोष्ट लाईक र टिप्पणी गरेर कुराकानी गर्छन्; तिनीहरूले तपाईंको फेसबुक पृष्ठको समीक्षा सत्रमा समीक्षा छोड्नेछन्। सबै भन्दा माथि, तिनीहरूले तपाईंको पोस्ट साझा गर्दछन्, जसले गर्दा उनीहरूको आफ्नै फलोअरहरूले तपाईंलाई याद गराउँदछन्।
इन्स्टाग्राममा तपाईंको ब्रान्ड मार्केट गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका भनेको तपाईंको व्यवसायको लागि बलियो उपस्थिति सिर्जना गर्नु हो। तपाईंको सामग्री बारम्बार अपडेट गर्नुहोस्; तपाईंको बायोमा तपाईंको ब्रान्डको बारेमा स्पष्ट र चाखलाग्दो जानकारी समावेश गर्न दिनुहोस्। फेसबुक जस्तै, इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरू इन्फोग्राफिक्स मन पर्छ; तिनीहरू ग्राफिक्स बिना लामो पोष्टको साथ सायद संलग्न हुन्छन्। यसैले तपाईंले फन्फिफुल इन्फोग्राफिक्सको प्रयोग आफ्नो सन्देश र जानकारी तपाईका अनुयायीहरूका साथै सम्भावित अनुयायीहरू/ग्राहकहरू मार्फत लिनु पर्छ।
साथै, तपाईंको ब्रान्ड सचेतना बढाउन इन्स्टाग्राम प्रभावकर्ताहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको सगाई रणनीतिहरूको अतिरिक्त, तपाईंले आफ्नो ब्राण्डलाई बढि महत्वपूर्ण संख्यामा बाहिर निकाल्न इंस्टाग्रामको भुक्तान गरिएको विज्ञापन दृष्टिकोणको उपयोग गर्नुपर्दछ। इन्स्टाग्राममा तपाईंको एसएसएम को लागी रणनीति बनाउनुहोस्, र धेरै पछि तपाईले केही फरक पाउनुहुनेछ।
ट्विटर एक पेची .्गी सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म हो जसमार्फत थप व्यवसायहरू र संगठनहरूले उनीहरूको ब्रान्ड जागरूकता बढाउँछन् र उनीहरूको ग्राहकहरूको संलग्नता बढाउँछन्। ब्राण्ड जागरूकता र ब्रान्ड सगाई "निम्न, ट्वीट्स/रिट्वीट, मनपर्ने र जवाफहरू" को माध्यमबाट ट्विटरमा प्राप्त गरिन्छ।
यदि तपाइँ ट्विटरमा तपाइँको सामाजिक मिडिया मार्केटिंग रणनीति राम्रोसँग राख्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको ब्रान्ड जागरूकता, नयाँ ग्राहकहरु/ग्राहकहरु को थप, र बिक्री/राजस्व। ट्विटरको साथ कुञ्जी स्थिरता, शीघ्र कार्य, र बज उन्माद हो।
स्थिरताका सम्बन्धमा, तपाईंको ब्रान्ड लगातार ब्रान्ड सम्बन्धित जानकारी र ट्रेंडिंग मामिलाहरूमा कमेन्ट्री द्वारा ट्वीट गर्ने मार्फत यसको अनुयायीहरूको अनुहारमा रहनु आवश्यक छ। तपाइँले उनीहरूलाई कुराकानी गर्न आवश्यक पर्दछ अन्तर्क्रियात्मक इन्फोग्राफिक्स र छोटो पाठहरु जुन तपाइँको ट्वीटमा जवाफ दिन उकसाउँदछ। ग्राहकहरू ट्विटरमा कल गर्दा तपाईं पनि कारवाहीमा चाँडो हुनुपर्दछ।
तिनीहरूलाई उनीहरूको गुनासोहरू प्रसारण गर्न दिनुहोस् र त्यसपछि तिनीहरूलाई यथासक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्; ग्राहकहरु यसको कदर गर्दछ। यसका साथै, सम्भावित ग्राहकहरूले यो ट्रेनमा सम्मिलित हुन झुकाव राख्नेछन् किनकि उनीहरूलाई थाँहा छ कि तपाईंको ब्राण्डले उनीहरूलाई शिष्टतापूर्वक व्यवहार गर्नेछ। याद गर्नुहोस् कि यो ट्वीटरमा प्रवृत्तिमा धेरै हुँदैन। सकारात्मक कारणका लागि प्रवृत्ति गर्न को लक्ष्य, यो तपाईंको व्यवसाय राम्रो गर्छ।
।। सामाजिक मिडिया मार्केटि Services सेवाहरूको प्रकार्य (एसएमएमएस)
Brand ब्रान्डको हालको सामाजिक मिडिया स्थितिको विश्लेषण
एक topnotch एसएमएमएस पहिले कुनै सामाजिक मिडिया मार्केटिंग रणनीति परिचय सेट गर्न अघि तपाइँको ब्रान्डको हालको चरण र सामाजिक मिडिया उपस्थिति सर्तको स्तरको विश्लेषण गर्छ। यस्तो सेवाले पहिले तपाइँको ब्रान्ड, यसको प्रतिस्पर्धीहरू, र लक्षित श्रोतालाई SMMS सिर्जना गर्नु अघि बुझ्नको लागि मार्केट विश्लेषण गर्दछ। यस पछि, एसएमएमएसले रणनीतिहरू विकास गर्न र नयाँ दृष्टिकोणहरू डिजाइन गर्न सक्दछ जुन ब्रान्डको जागरूकतालाई बढावा दिन्छ।
Brand ब्रान्डका लागि संलग्न सामग्रीको सिर्जना
सामाजिक मिडिया मार्केटिंग सेवालाई कसरी एसएमएमको उत्तम प्राप्त गर्ने बारे थाहा छ, यसले यसलाई सुरु गर्ने छ तपाइँको ब्रान्डको लागि अद्वितीय तर आकर्षक सामग्री सिर्जना गर्दै। तपाईंको ब्रान्डको सामाजिक मिडिया अनुयायीहरूसँग अद्भुत सामग्री संलग्नता प्राप्त गर्दा, सेवा तपाईंको ब्राण्डको अद्वितीय आवाज प्रोजेक्टको साथ पनि चार्ज गरियो।
सोशल मिडिया मार्केटिंग आउटफिटले तपाईंको ब्रान्डको लागि सामग्री सिर्जना गर्दछ र समयमै पोष्टिंगको लागि सामग्रीको तालिका बनाउँदछ। मार्केटिंग सेवा तपाइँको ब्रान्डको सक्रिय सामाजिक मिडिया अनुयायीहरु को कुराकानी र तिनीहरुलाई जवाफ दिएर कुराकानी गर्नेछ। तिनीहरू तपाइँको ब्रान्डको सोशल मिडिया उपस्थिति निगरानीको लागि जिम्मेवार छन्।
P प्रभावी भुक्तानी सामाजिकको सिर्जना मिडिया अभियानहरू
एक topnotch सामाजिक मिडिया मार्केटिंग सेवा आफ्नो ब्राण्ड को लागी विभिन्न सशुल्क अभियानहरु लाई अनुकूलन गर्न को लागी यसको सामाजिक मिडिया उपस्थिति बढाउन र राजस्व बृद्धि गर्न सक्षम हुनु पर्छ। संगठनले लक्षित श्रोताको लागि रणनीतिक हिसाबले डिजाइन गरिएको उच्च प्रदर्शन गर्ने विज्ञापनहरू सिर्जना गर्दछ। तिनीहरू तपाईंको ब्रान्डको उद्योगसँग सम्बन्धित सामाजिक मिडिया प्रभावकर्ताहरूमा पुग्ने छन् र तिनीहरूलाई तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरूको समर्थन गर्न पाउनेछन्।
Your तपाईंको सोशल मीडिया अभियानहरू ट्रयाक गर्दै
तपाईंले भाँडामा राख्नु भएको कुनै पनि सामाजिक मिडिया मार्केटि service सेवा लगातार तपाईंको सोशल मिडिया प्लेटफर्मलाई अनुकूलित गर्ने र तपाईंको अनुयायीहरूको सगाई ट्र्याक गर्नको लागि शुल्क लगाइन्छ। मार्केटिंग आउटफिटले तपाइँको जैविक र भुक्तान अभियानहरूलाई ट्र्याक गर्छ जबकि सोशल मीडिया मार्केटि marketing रणनीति सुरु भएदेखि नै तपाईले प्राप्त गर्नुभएको नेतृत्वको विश्लेषण गर्दछ। तिनिहरु तपाइँको सामाजिक मिडिया पूनरावलोकन र फीडब्याक, उल्लेख, र लाइक को भी निगरानी गर्दछ।
समग्रमा, सामाजिक मिडिया मार्केटिंग सेवा तपाईंको को साथ तपाईंको सामाजिक मिडिया प्लेटफार्मों समिकरण हुनेछ। ब्रान्डको वेबसाइट तपाइँको सामाजिक मिडिया उपस्थिति र अभियानबाट बाहिर राम्रो पाउन मद्दत गर्न। Semalt ले तपाइँको वेबसाइटको साथ तपाइँको सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू समक्रमण गर्न मद्दत गर्न सक्दछ अद्भुत नेतृत्व प्राप्त गर्न।
आजको संसारमा, ग्राहकहरूले ग्राहकको अपेक्षा र ग्राहकहरूको साथ राख्नको लागि उनीहरूको सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू अनुकूलित गर्न आवश्यक छ। तपाईंको उद्योगमा प्रतिस्पर्धी रहनको लागि, तपाईंलाई एक कुशल सोशल मिडिया मार्केटिंग सेवा आवश्यक पर्दछ, विश्व आज कत्तिको एकीकृत छ विचार गर्दै। Semalt को विशाल अनुभव र सामाजिक मिडिया मार्केटिंगमा विशेषज्ञताको साथ, तपाईं आफ्नो व्यापार लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, सक्रिय र इनामदायी अनलाइन उपस्थिति स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ।